CZS dzakatevedzana pafiripi kuyerera chinovhara
Iyo skrini yeplate yakagadzirirwa neakakosha zvinhu uye ine hupenyu hwakareba hwebasa; iko kumhanyisa kumhanya kweiyo sieve ndiro iri ka800 / min, uye iko kudengenyeka kwechinhu kwakakura kunge 50g; kumisikidzwa kwepasefa yesefa hakudi chero mabhaudhi, saka zviri nyore kukatanura uye kutsiva.
Banana rakaumbwa rinodedera skrini
Czxd bhanana mhando inozungunusa skrini rudzi rweyako inoenderana-inorema-basa yakaenzana ukobvu skrini, iyo inoshandiswa zvakanyanya mukuvhenekesa kugadziriswa kwemidziyo mikuru yevhoriyamu kuchera uye kupfeka mashandiro. Pane hwaro hwekuzeya uye hwekuyedza vekunze tekinoroji, kambani yedu yakagadzirirwa uye kugadzira czxd bhanana mhando vibrating skrini.
GPS yakateedzana yakakwira frequency vibration dewatering skrini
Kuti usangane nezvinodiwa zvekutsvedza kweslime uye zvakanaka zvinhu zvekudzikisa uye kupatsanura, uye kuzadzisa chinangwa cheakakura ekugadzirisa kugona, yakanaka yekudzikisa mhedzisiro uye yakasimba kuchinjika, yakakwira frequency uye yakakwira vibration simba echimakanika maitiro anogamuchirwa.
GT akateedzana dhiramu skrini
GT - akateedzana dhiramu skrini yakakosha yekuongorora michina yakagadzirwa nefekitori yedu yesimbi, indasitiri yemakemikari, zvekuvaka, kuchera uye mamwe maindasitiri. Inokunda dambudziko rekuvharika kwechidzitiro kana uchiongorora zvinhu zvakanyorovera neyaka tenderera kutenderera skrini uye yakaenzana skrini, inovandudza kuburitsa uye kuvimbika kwenzira yekuongorora, uye inorumbidzwa zvikuru nevazhinji vashandisi.
HFS dzakateerana fetiraiza chidzitiro
HFS kemikari fetiraiza chidzitiro iri mhando nyowani yekudengenyeka kwechidzitiro. Inonyanya kushandiswa kuisa fetiraiza dzakasiyana siyana uye zvimwe zvemakemikari zvigadzirwa. HFS mhando yemakemikari manyowa ekuongorora muchina waunza chiAmerican "terakot" chimiro uye tekinoroji nyowani yeringi groove rivet. Ruzha rwekudengenyeka ruzha, kuongorora kwakanyanya kuongorora uye kugadzirisa kuri nyore.
SZR akateedzana inopisa ore vibrating skrini
SZR yakateedzana inopisa ore vibrating skrini inowanzoshandiswa kupatsanura svikiro uye diki saizi sinter ore ine tembiricha ye600-800oc mu metallurgia indasitiri, uye kupedzisa yunifomu kugovera kune inotonhodza michina.
Kumusoro uye pasi chinozunguzira chidzitiro
Iyo yekumusoro inodedera skrini uye yezasi inodedera skrini ndizvo zvinodiwa nevatengi vekambani yedu. Chidzitiro chinotetemesa chakagadzirwa uye kugadzirwa uchishandisa echimiro nzvimbo.
Boom vibrating sikirini
Xbzs yakateedzana goko ruoko ruoko rwekuzungunusa skrini iri mhando nyowani yekuongorora michina. Inonyanya kushandiswa kuongorora pasi pehombodo yevira uye inokodzera kupatsanura zvinhu zvakakura, zvepakati nepadiki granular zvinhu.
ZDS akateedzana elliptical yakaenzana ukobvu skrini
Elliptical yakaenzana ukobvu chidzitiro inoshandiswa ore kupatsanura sinter, sinter pellet uye yekumigodhi indasitiri mune metallurgical indasitiri, uye kupatsanura uye kuongorora mashandiro mumarasha indasitiri. Inofananidzwa nemamwe marudzi eiyo sieving michina yeakafanana maratidziro, iwo ekugadzirisa masimba akakura uye iko kuongorora kwekushanda kwakakwirira.
Ya (k) yakateedzana hombe kutenderera kuchidzungudza skrini
Ya (k) akateedzana akakura-denderedzwa anotenderera echidzitiro michina yakakura yekuongorora inoitirwa indasitiri yemigodhi. Iyo inokodzera yakakura-chiyero kuyera zvinhu. Iine hunhu hwekugadzirisa kukuru, kugona kwakanyanya, kusimba kwakasimba uye kugadzirisa kuri nyore.
ZK akateedzana mutsetse vibrating skrini
Iyo Linear vibrating skrini inonyanya kushandiswa kusarudzika mumugodhi wemarasha, kuchera, zvekuvaka, emagetsi nemakemikari indasitiri, iyo yakateedzana skrini inotora yakanyanyisa kukochekera riveting neyakavhara rivet, ine yakapusa dhizaini, yakasimba uye yakasimba, yakaderera ruzha, nyore kuiswa uye kugadzirisa, nezvimwe.
ZSG Linear inodedera skrini
ZSG nhepfenyuro inowirirana vibrating skrini ndeye nyowani uye inobudirira yekuongorora michina, iyo ine hunhu hwekushanda kwepamusoro, kusakara kusakara, ruzha rwepasi, hupenyu hurefu hwebasa, kudzivirira kusvibiswa, nyore hupfumi, kuponesa simba uye chitarisiko chakanaka. Inoshandiswa zvakanyanya pakuongorora mashandiro emakuru, epakati uye madiki zvidimbu mumigodhi, simbi, marasha, indasitiri yemakemikari, simba rekushisa, zvekuvaka uye mamwe maindasitiri.